I-verizon 5g entsha enefayile yokugubungela elunxwemeni ijezi ifumana uvavanyo lwesantya kwaye iphumelele ... elunxwemeni
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Newfangled Verizon 5G yokugubungela kwiJersey Shore ifumana uvavanyo lwesantya kwaye iphumelele ... elunxwemeni
Njengokuba besanda abantu abagonywayo, itsho iVerizon, iqaphele ukwanda kokuhamba, okanye, indlela ekulinganisa ngayo, 'ii-handoffs ezihambayo, amaxesha apho iseshoni yedatha isuka kwenye indawo yeseli iye kwenye njengoko abasebenzisi behamba okanye beqhuba, benyuke nge-28% ukusukela phakathi kuJanuwari, kwaye bonyuse i-31% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo ngeli xesha linye. '
Kungenxa yesi sizathu sokuba iBig Red ilungele ukwanda kwemisebenzi yehlobo, xa kuthelekiswa ne2020, kwaye iqale ukukhulisa ukugubungela kwayo i-Ultra Wideband 5G yokufikelela kwiindawo ezidumileyo zeholide kuqala, ukuze ilungele izihlwele zabantu ezivela kwixesha elide nelidinayo. ezitshixwayo.
Iilwandle ezidumileyo kunye neendawo zokubona indawo apho iBig Red yandisa ngokukhawuleza inethiwekhi ye-mmWave ibandakanya iJersey Shore (iAtlantic City, iAsbury Park, iLong Beach Island), iilwandle zaseDelaware, iOcean City Maryland, kwaneNiagara Falls. Ezo ndawo zidumileyo zempela veki ngoku zonwabele ukuphuculwa kwe-5G kodwa ikhawuleza kangakanani inyani, xa kuthelekiswa nenethiwekhi ye-4G apho?
I-Verizon 5G vs 4G isantya kunxweme lwaseJersey
Ewe, njengesiqhelo, I-Sascha Segan evela kwi-PCMag uneziphumo zovavanyo zokubonisa, kwaye uVerizon ukuhambisile ngokwenyani oko ibikutsho etotini. Ukusukela esona sithembiso sikhulu senethiwekhi yanamhlanje ye-5G sisikhundla, endaweni yesantya- esele zikhawuleze ngokwaneleyo ukuba zisetyenziswe yonke imihla kuthungelwano lwe-4G yokugqibela, nazo-iindawo ezixineneyo zeholide yindawo efanelekileyo yokuvavanya eso sithembiso.
Akufuneki ukuba sithi, isantya besikhawuleza ngaphandle, njengoko ubona kwi-1.6Gbps isifinyezo apha, kodwa, okona kubaluleke kakhulu, babehlala befumaneka kwezi zoom zingaphazanyiswayo zidibana nabathathi-nxaxheba abaninzi, ukusasaza ividiyo, okanye ukukhuphela imidlalo ngokukhawuleza.
Ukungena ngaphakathi, nangona kunjalo, yenye ibhiya, njengoko iinethiwekhi ze-mmWave zisebenza kakuhle hayi ngaphezulu kwe-1000 yeenyawo ukusuka kwinqaba, kwaye ngaphakathi ngaphakathi uphawu luyehla njengelitye. Ngenxa yokuba ezi ndawo zazinabakhenkethi abaxineneyo, nangona kunjalo, uninzi lwabantu luhlala ngaphandle kwaye lunokusebenzisa ithuba leVerizon & apos; i-5G yokugubungela entsha eJersey Shore, kwaye leyo yayiyindlela yokuziphatha kwebali ukwazi ukuya kwimpelaveki yaselwandle.
Ngaba iphone x inayo iminwe
moto z force isikrini ekuqaleni
Ngaba i-Samsung ingayisika njani i-Galaxy Z Fold 3 kunye ne-Z Flip 2 amaxabiso kodwa yongeze izinto ezintsha?
I-HP Elite X3 vs iPhone 6s Plus vs Samsung Galaxy Qaphela 5 vs Nexus 6P kunye nokunye: ubungakanani bokuthelekisa
Nazi iiapos zendlela yokuseta i-animated GIF okanye ividiyo ye-MP4 njengephepha lodonga elihambayo kwi-Android